Wafti uu hogaaminayo R/wasaare ku xigeenka dawlada federaalka oo soo gaaray Puntland. – Radio Daljir
Wafti uu hogaaminayo R/wasaare ku xigeenka dawlada federaalka oo soo gaaray Puntland.
Abriil 17, 2012 12:00 b 0
Galkacyo, April 17 – Wafti uu hoggaaminayo kuxigeenka R/wasaaraha Soomaaliya, ahna wasiirka Ganacsiga dawladda federaalka KMG ah C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif, ayaa maanto soo gaaray Puntland.
Waftigaan oo ka kooban lix xubnood, uuna horkacayo R/wasaare kuxigeenku ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo, kuwaasi oo u soo tallaabaday magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, halkaasi oo socdaalkoodu ku abbaarnaa.
Xubnahaan ka socda dawladda federaalka oo u badan golaha xukuumadda, ayaa imaatinkooda Puntland uu la xiriira dhawr qorshe oo uu ugu mug-weyn yahay ka qaybgalka shir weynaha lagu damacsan yahay meelmarinta dastuurka Puntland sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareeddo kala duwani.
Waftigaan waxaa magaalada Garowe u sii galbiyey mas’uuliyiinta maamulka gobolka Mudug oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Maxamed Yuusuf Jaamac ‘Tigay’.
Madaxdaan dawladda federaalka, waxaa ku jira xubno si gaar ah dawladda ugu qaabilsan arrimaha dastuurka, uuna ka mid yahay wasiir-dawlaha dastuur, arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, waxaana lagu wadaa in ay madasha shirka ka soo xaadiraan berri oo loo ballansan yahay codbixinta dastuurka.
Horay waxaa magaalada Garowe ugu sugnaa tiro xildhibaanno federaalka ah, kuwaasi oo goob joog ah furitaankii shir weynaha dastuurka Puntland.
Dastuurka Puntland oo cod aqlabiyad ah lagu ansixiyey; madaxda dawladda iyo goob joogayaasha oo ka hambalyeeyey meelmarkiisa.
Baahin: Axad, Apr 15, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Shirweynaha afti u qaadida dastuurka Puntland oo ka furmay Garowe; Khudbadihii laga jeediyey furitaanka shirweynaha; Ergada shirweynaha dastuurka Puntland oo isla meel dhigay 1/6 ee dastuurka Puntland; 5 qof oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka ilaalada ee R/wasaare Gaas oo loo xiray qarixii tiyaatarka Muqdisho.